DHAGEYSO:Raila Odinga oo ka hadlay go’aankii maxkamadda ee BBI | Star FM
Home Wararka Kenya DHAGEYSO:Raila Odinga oo ka hadlay go’aankii maxkamadda ee BBI
DHAGEYSO:Raila Odinga oo ka hadlay go’aankii maxkamadda ee BBI
Madaxa xisbiga ODM Raila Odinga oo wareysi siiyay idaacadaha kala ah Inooro FM, Kameme FM, Inooro Tv, Kameme Tv iyo Gukena FM ayaa sheegay in go’aankii 20-kii bishan siddeedaad ka soo baxay maxkamadda racfaanka ee dalka ee lagu joojiyay geeddisocodkii BBI uu Kenyaanka ka hor istaagay faa’iidooyin badan.
Waxaa uu xusay in ka hor inta aan la soo bandhigin warbixintii la xiriirtay qorshahan lala wadaagay shacabka ku nool dhammaan ismaamullada dalka sidaas awgeedna uunan fahmi karin sababta ay garsoorayaasha u sheegeen in aan nidaamkan si buuxda looga qayb gelin kenyaanka.
Ra’iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa tilmaamay in hadii BBI la dhaqangeliyo xal loo helayo caqabado ay ka mid yihiin sinnaan la’aanta jinsiyadeed ee dhanka hoggaanka iyo in deegaanada kala duwan ee wadanka aynan si siman u qaybsan kheyraadka.
Waxaa uu tusaale u soo qaatay ismaamullada Kiambu iyo Mandera oo ay aad u kala duwan tahay tirada dadweynaha ee ku nool balse marka la eego miisaaniyadda la siiyo aynan cadaalad ahayn sida uu hadalka u dhigay.
Madaxa ODM ayaa dhanka kale beeniyay inuu jiro wax khilaaf ah oo kala dhexeya dhigiisa Wiper Kalonzo Musyoka.
Sidoo kale Raila Odinga oo wax laga weydiiyay siyaasadda isbeheysiga cusub ee OKA iyo kulamada ay xubnaha mucaaradka la yeelanayaan madaxweynaha ayaa ku jawaabay
Waxaa uu Mr. Odinga madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto u soo jeediyay in hadii uunan ku qanacsanayn ka mid ahaanshaha dowladda dhexe inuu is casilo.
Raila ayaa Ruto ku eedeyay inuusan daacad ahayn maadaama uu kenyaanka ka dhaadhicinayo in Jubilee ay waxyaabo badan oo dhanka horumarka ah fulisay isagoo doonaya in la doorto sanadka 2022-ka balse uu dhanka kale dhaliilayo waxqabadka dowladda uu ka tirsan yahay.
Madaxweyne ku xigeenka dalka ayaa horay u sheegay inay saameyn ku timid fulinta qorshayaashii horumarineed ee maamulka Jubilee tan iyo markii ay sanadkii 2018-kii heshiiyeen madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta iyo madaxa ODM Raila Odinga.
Hasa ahaate ra’iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa eedeytani beeniyay isagoo dhanka kale xusay in heshiiskii taariikhiga ahaa aan looga gol-lahayn in uu taageero siyaasadeed uga helo madaxweynaha.
Previous articleDHAGEYSO:Guddoomiyaha baarlamaanka oo sheegay in loo baahan yahay isbeddel ballaaran oo dhanka hoggaanka ah